.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Frame Photo Editor [ Full Version ]
Frame Photo Editor [ Full Version ]
ကျွန်တော်လည်း ဒီရက်ပိုင်း ဓါတ်ပုံ ပြင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးတွေပဲ လိုက်ရှာနေမိတယ်။ သူငယ်ချင်း တော်တော်များများ
ဓါတ်ပုံလေးတွေ အပျော်သဘော ပြင်ကြတာမျိုး သဘောကျမှာပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက သုံးရတာလည်း လွယ်တယ်။
Frame လေးတွေလည်း မနည်းများတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံတွေနဲ့ လုပ်လို့လည်း ရတယ်။ အရုပ်လေးတွေ ၊ ပန်းပွင့်ပုံနဲ့
တစ်ခြား ပုံတွေရော နောက် Mask ဒီဇိုင်းတွေလည်း အတော်စုံပါတယ်။ အောက်မှာ Screenshot လေးတွေ ပြထားတယ်။
လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10 MB ပဲ ရှိပါတယ်။
Download: Frame Photo Editor [ Full Version ]
ဆော့ဝဲလ်ကို သုံးမယ်ဆိုရင် ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ .rar ဖိုင်လေးကို Right Click >> Extract Here လုပ်လိုက်ပါ။
Frame Photo Editor ဆိုတဲ့ Folder လေး တစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ ဆော့ဝဲလ်နဲ့ အသုံးပြုနည်း
အစုံ ပါပါတယ်။ Install လုပ်ရန် မလိုပါ။ Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေ..
ဤပို့စ် [ သို့မဟုတ် ] ဆော့ဝဲလ် ဒေါင်းလုပ်လင့်အား လွတ်လပ်စွာ ကူးယူမျှဝေနိုင်ပါသည်..။ Credit ပေးရန် မလိုပါ။
Posted by Thurainlin at 21:50
Labels: Photo, Photo Editor, Software